‘तक्मे बूढा’ को तरक्की::local sandesh
- पर्वत पोर्तेल / शनि, जेष्ठ २७, २०७४
झापा । – विल्सनविक्रम राईलाई कलाकार बन्ने हुटहुटी सानैदेखि थियो । संयोगले लक्ष्मीनाथ शर्मा निर्देशित ‘साथी’ फिल्ममा छोटो भूमिका गर्ने मौका जुर्‍यो । उति बेला विल्सन मात्रै १० वर्षका थिए । साना साथीहरूसँग तास खेल्दै गरेको करिब ३० सेकेन्डको दृश्यमा विल्सन देखिन्छन् । उनको संवाद छैन । बोल्न नपाउँदै भागिहाल्नुपर्ने दृश्य छ । ‘साथी’ फिल्म खेलेपछि यिनको कलिलो मस्तिष्कमा हिरो बन्ने भूत सवार भएछ । छरछिमेकमा बिहे, पूजा भयो कि नाच्न पुगिहाल्ने स्वभावका उनी फिल्म सुटिङका लागि हिरो–हिरोइन आए रे भन्नेबित्तिकै दौडिहाल्थे । अवसर मिलोस्, नमिलोस् यिनलाई मतलब थिएन । अवसर पाइहाल्दा खेलि पनि हाल्थे । नपाउँदा दु:ख मान्दैनथे ।
त्यसपछि केदारले उनलाई मेरी बास्सैमा ‘ब्रेक’ दिए । केदारको गुनलाई कहिल्यै बिर्सन नसक्ने बताउँछन्, विल्सन । केदारलाई ‘गड फादर’ मान्छन् । देश–विदेशका कार्यक्रमहरूमा विल्सन केदारको गुनप्रति सधैं नतमस्तक बन्ने गर्छन् । भन्ने गर्छन्, ‘उनी (केदार) तपार्इंहरूका माग्ने बूढा होलान, मेरा त दिने बूढा हुन् ।’ लिम्बू लवजको ‘नाइन्टिन फोन्टिन…’ ले उनलाई देश–विदेशमा ज्यादै लोकप्रिय बनायो । करिब दुई दर्जन जति मुलुक घुमायो । केही करोड दाम दिलायो । विल्सनको परिचय नै फेरिएर तक्मे बूढा बन्यो । काम नपाएर सडकमा भौंतारिहिंड्ने विल्सन रातारात सेलिब्रिटी बने । विदेशबाट बाक्लै बोलावट हुन थाल्यो ।
भिन्न–भिन्न भूमिका गर्न सक्ने क्षमताका विल्सन अभिनय मात्रै गर्दैनन् । नृत्य गर्न र गीत गाउन पनि उत्तिकै अब्बल छन् । यिनले गाएको ‘आई लभ यू सेन्तेरेम…’ बोलको गीत लोकप्रिय छ । पछिल्लो समय ‘चानापुल्टुङ नापुल्टुङ…’ बोलको गीत पनि धेरैले रुचाए । बहुमुखी क्षमताका विल्सन भर्खरै गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट विभूषित भए । ‘जनसेवा’ पदक पाएपछि विल्सन थप उत्साहित बनेका छन् । चलचित्र ‘सम्झना’ मा तेस्रोलिंगीको भूमिका गरेका विल्सनले ‘नबिर्सें तिमीलाई नपाएँ तिमीलाई’, ‘कसले चोर्‍यो मेरो मन’, ‘मेरो प्यारो माइतीघर’, ‘बस नं. १३६’, ‘छ एकान छ’, ‘सायद’, ‘अर्धकट्टी’, ‘वान वे’, ‘सम्झना’, ‘रिदम’, ‘फेसबुक’, ‘नेपथ्य’ जस्ता अब्बल फिल्ममा काम गरिसकेका छन् । देश–विदेशका करिब पाँच हजारभन्दा बढी स्टेज शोबाट दर्शक हँसाएका छन् । स्वदेशमा निकै ख्याति आर्जन गरिसकेका विल्सनको बलिउड यात्रा अझ लम्बिन्छ या टुंगिन्छ ? रिलिज तयारीमा रहेको ‘बोरिभाली का ब्रुस ली’ फिल्मको प्रदर्शनले छिनोफानो गर्ने नै छ । ( कान्तिपुर दैनिककाे काेशेलीबाट साभार)